Vhiki ine iyo iPhone SE Izvo Zvakakosha Izvo? | IPhone nhau
Pablo Ortega | | iPhone SE, IPhone Zviteshi
Chishongo chazvino mukorona yaApple, iyo iPhone SE, Chave chiri kutengeswa muUnited States kweinopfuura vhiki chete uye, ku iPhone News, tanga tichizviongorora kwazvo panguva yese iyi, kuti ndikupe kuongorora kwakadzama kwechiitiko chedu ne "fomati yekare".
Takaziva, pamberi, izvo iPhone SE foni ine simba, sezvo mukati mayo ichivanza chivakwa chakafanana chaizvo neicho cheiyo iPhone 6s. Asi zvinoita sei zuva nezuva-zuva nekushandisa kwese? Kwakanaka here? Zvinoshamisira here kutora nhanho kumashure uye kudzokera kumasendimita mana mushure mekushandisa mafomati eiyo iPhone 6s uye 6s Plus? Kuita kwako kwakadii? Inguva yekupindura iyi yese mibvunzo.
1 Ergonomics: Iyo nhungamiro yatakabva nayo
2 Hapana kupenya pachiratidziri
3 Iyo anachronistic dhizaini: Hazvikurudzirwe kune vanoda "izvo zvichangoburwa"
5 iOS 9. Mubatanidzwa wakakwana
6 Mhedziso: Mutengo wakanakisa munhoroondo yeApple. Ndinogona kutenga iyo iPhone SE?
Ergonomics: Iyo nhungamiro yatakabva nayo
Iyo yepasi rose smartphone musika inoratidza maitiro kune zvikwangwani zvine mafomati anodarika mashanu inches. MaSouth Korea Samsung yaive imwe yevagadziri vekutanga kusangana nerudzi urwu rwefoni, vakabatana neGreen Note nhepfenyuro. Apple yakasarudza kurwira zvakare nemaPhones maviri nemafomati akasiya kumashure mana. Nekudaro, iyo Californian femu inozviziva izvo iwo mana inches achiri ane vanoyemura vachiri uye kwete chete munyika dzichiri kusimukira, saka pachine mukana wakanaka wemusika mu nhare dzinopfuura masendimita mashanu. Spain inogona kuve imwe yeaya nyika iyo iyo iPhone SE yaizowana musika unonakidza.
Unoyeuka here iwo mazuva apo ergonomics yaive zvese? Iyo iPhone SE iri pano kukuyeuchidza. Apple payakasvetukira ku4,7 inches uye 5,5 inches, isu pamwe takarasikirwa nemutemo iwoyo. Iyo iPhone SE inonzwa kugadzikana kwazvo mumaoko. Hapanazve kushandisa mavoko maviri nguva dzese. Nemasendimita mana tinokwanisa kupindura mafoni anouya, nyora mameseji uye kufamba neruoko rumwe.
Imwe pfungwa yakanaka ndeyekuti isu hatizofanirwe kutendeukira kune kusagadzikana kwemunwe unotambanudza kuvhara chidzitiro chose. Zvinoenderana nechimwe chiziviso cheApple pakuvhurwa kweiyo iPhone 6, chigunwe chinofanirwa kukwana zvakakwana kuvhara upamhi uye kureba kwemasendimita 4,7, chinova chokwadi che "hafu". Hongu, ichokwadi kuti tinogona kufamba pachirahwe nechigumwe chedu, asi nekuchimhanyisa neimwe nzira isingafadzi. Isu takaisawo yedu iPhone munjodzi, nemikana mikuru yekuti inozopedzisira yadonha kubva mumaoko edu uyezve tichifunga kuti iyo iPhone 6s dhizaini inotsvedza. Kuwana iyo iPhone SE yakakandwa kubva mumaoko ako ibasa iro rakaomarara.
Izvo hazvishamise kuita kusvetuka kubva ku4,7 inches kusvika kuchioniso cheiyo iPhone SE. Nenzira iyi isu tinorarama maitiro ekugadzirisa zvakafanana nezvatakasangana nazvo pataifanira kusimudzira kune iyo iPhone 6 uye 6 Plus fomati. Pakutanga iyo yekufambisa ichave yakasununguka iwe, asi gadzirira kurwa nekhibhodi. Mavara acho akanyanyisa uye minwe yako inoshandiswa kufamba zvakasiyana. Iwe unozokanganisa kanopfuura kamwe chete paunenge uchinyora. Nezuva rangu rechipiri rekushandisa foni, ini ndaive ndajaira kukomputa khibhodi, kunyangwe ndaive ndichine tsamba shoma. Hapana kana icho icho chisina kugadziriswa chisingakwanise kugadzirisa. Chimwe chinhu chinokubhadharira kuti ujairire pakutanga chichava kugoverwa kwezvishandiso pachiratidziro chekumba.
Kurema chinhu chatisingakwanise kukanganwa. Iyo iPhone SE haina kureruka. Iyo inorema 113 gramu ichienzaniswa ne143 gramu yemukoma wayo mukuru, chimwe chinhu chinobatsira kuti foni igadzikane kubata uye izvo pasina mubvunzo zvinokwezva kutariswa kweumwe mutengi.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, ndakapotsa ndakahwanda muhomwe yebhurugwa rangu foni isina kumira kunze kana kuputika kwenguva refu. Dzimwe nguva ndinokanganwa kuti ndinotakura SE yangu muhomwe.
Hapana kupenya pachiratidziri
Chinhu chisati chanyatsogonesa kwandiri iPhone SE ndiko kupenya kwechidzitiro. Nepo mafomati ayo ari akasununguka kwazvo kwandiri, iyo skrini inoda kuvandudzwa.
Iyo mutsauko mukupenya kuripo pane iyo iPhone SE skrini ichienzaniswa neiyo yeiyo iPhone 6s. Iyo ina-inch foni haina kunyanya kupenya. Kuti utitsanangure zvirinani, isa yako iPhone 6 / 6s mubhatiri yekuchengetedza modhi. Siya foni iine skrini, asi usabate kwechinguva. Masekondi mashoma gare gare iwe uchaona kuti iyo skrini inoderedza kupenya otomatiki, kuwedzera nguva yekuzvimiririra kwechigadzirwa. Zvakanaka, iyo iPhone SE yakaita sekunge yaive mune iyo cathartic mamiriro ebhatiri ekuchengetedza modhi nguva dzose. Iyo iPhone SE inotora nhanho kumashure mune izvi. Ichi chinhu, pasina kupokana, chinobatsira kuwedzera bhatiri rechishandiso pane zuva nezuva.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kutariswa kuti kana tichidzoka kumasendimita mana, tinopa dzokera kumashure mukutarisa zvemultimedia. Iwo mafomu e4,7 uye 5,5-inch akagamuchirwa zvakanaka pakati peavo vashandisi vanofarira kudya vhidhiyo nemitambo pafoni dzavo. Aya marudzi evashandisi anosarudza makuru masikirini. Mumasentimita mana tinosuwa skrini hombe kana tichiona mavhidhiyo kubva kumaalbum edu, YouTube kana kunyange Facebook. Kana izvi zvakakosha kwauri, funga kaviri usati waita kusvetukira kune iyo iPhone SE.
Iyo anachronistic dhizaini: Hazvikurudzirwe kune vanoda "izvo zvichangoburwa"
Izvo ndizvo zvandinoda zvishoma nezve iyo iPhone SE. Dhizaini yayo inounza chimwe chinhu chakasiyana muzuva nezuva, mushure megore nehafu neiyo iPhone 6 ne6s, asi chaizvo ndezvechinyakare.
Ngatizvitarisei izvi, ngatipei mazuva uye tidzidze mamiriro azvino emusika Dhizaini yeiyo iPhone SE ine makore mana ekuberekwa. Yaive munaGunyana 2012 pakaiswa iyo iPhone 5, iine chitarisiko chakafanana. Munharaunda umo zvigadzirwa zvemafoni zvinowanzo gadziridzwa gore rega rega kana makore maviri ega ega, iyo SE muchina wenguva unotitorera kudzoka kune nhanho ye iPhone 5. Iyo nzvimbo grey kara, iyo yataive nayo mumaoko edu, inova inofinha. Pachokwadi, Ini ndasuwa iyo yepakutanga nhema nhema 5 kuti raitaridzika sei, asi raipera nyore sei. Dema yaive njodzi mune iyoyo pfungwa, asi yaienderana yakarumwa apuro foni. Kumberi, iyo ID ID inosvinudzwa nebhatani repamba, chimwe chinhu chingangoitika pamwe nemamwe maruva anowanikwa (sirivheri, goridhe uye goridhe rakasimuka).
Iyo yekumashure ichiri iyo isina kusimba poindi muchikamu chino. Maitiro anoenderera, aine mitsetse miviri yegirazi nhema uye yepakati simbi chikamu. Chokwadi tinofanirwa kumirira kusvika kweiyo iPhone 7 yeApple kuti iburitse foni ine muviri wakafanana, isina mabhendi asinganzwisisike ayo anotyora nemaitiro efoni nekuda kwekuti mamwe marudzi ezvipingamupinyi anofanira kukundwa (izvo zvakaunzwa nemaantena efoni).
Mativi acho, pachawo, haandigumbure. Makona anosiyana zvishoma kubva kuiyo iPhone 6s: iwo mashoma kutenderera uye anozivisa zvakanyanya. Iwo mativi mabhendi matema ari pamusoro uye pasi pechigadzirwa zvinokwana iyo iPhone SE zvirinani kupfuura iwo grey mabhendi pane iyo iPhone 6s. Uye zviri nyore kupora, mune iyi fomati, iro bhatani remagetsi / skrini yekukiya kumusoro kweiyo terminal. Nekungotambanudza munwe we index isu tataura bhatani mukati mekusvikira
Kumashure tinowana runyorwa "SE", zita reiyi saga nyowani yePhones iyo nhanho kubva pane kunoratidzika kutadza kweiyo iPhone 5c, uye izvo zvinoita sekunge zviri kutanga kubva pakutanga zvichiperekedzwa nezano nyowani. Pazasi peichi chinyorwa tinowana dhata pane dhizaini uye kugadzira kwechigadzirwa, asi nerombo rakanaka, uye nekuda kwemitemo ichangoburwa muUnited States, marogo anotyisa anonyangarika izvo isu tisati taona zvichiratidzwa muiyo iPhone 5 uye 5s iyo yaitaura nezve kubvumidzwa kweFederal Trade Commission muUS, European Union uye data rine chekuita nekudzokorora kwayo.
MaGreek akasiya bhiza risingakuvadzi pamasuwo eguta reTroy sechipo uye nzira yekupedza hondo nemaTrojans. Izvo izvo vagari vemuTroy havana kuziva ndizvo chinhu chakakosha chaive mukati bhiza iro. Mauto eGreek akavanda muchipo chikuru ichi kurwisa nekutora guta. Aya ndiwo marongero anoita ngano iyi. Iyo iPhone SE ndeye Apple's Trojan Horse.
Ndechipi chikonzero cheichi fananidzo? Kungoti kune iyo iPhone SE, pasina kupokana, inovanza kukosha kwayo kwese mukati. Foni ine yakajairika chitarisiko, asi ine simba kwazvo chimiro. Uye neiyi Trojan Horse, iyo kambani inoshuvira kupinda nekukunda iwo ari kubuda misika ayo achakamirira. MuChina yakabudirira, asi iyo iPhone 5c yakanga isina kubudirira kwaitarisirwa mune mamwe matunhu. Uye zvinoita sekunge kupinda kweiyo iPhone SE hakuzove kuri nyore muIndia, asi chokwadi ndechekuti iyo Californian firm ine zviri nyore kupfuura nakare kose. Kwete chete ine simba iyo inorova mumisika, asiwo nemutengo, nyaya yatichazokurukura gare gare.
ari maapplication anofamba neicho kumhanya senge pane iyo iPhone 6s, nekuda kweiyo A9 chip ine 64-bit kuvaka uye iyo M9 processor. Unoyeuka here iyo nguva apo Apple yakaunza 64-bit processors uye vamwe veavo vaikwikwidza vakaseka zano rayo? Idzi dzaive dzisina sarudzo kunze kwekugadzirisa uye muchizvarwa chazvino che iPhone tinoona kuti iyo A9, yakabatana neichi chimiro, kugona kwakazara kwechigadzirwa kunosunungurwa. Chinhu chinoonekwawo mukuzvitonga. Iyo A9 chip uye yekumashure kamera lens yeiyo iPhone SE inotibvumidza isu kurekodha mavhidhiyo ane 4K mhando (kanokwana kana kukwira kupfuura High Tsananguro yemhando). Kutora mavhidhiyo pachisarudzo ichi nekugadzirisa iwo kuburikidza neMovie (yeApple yemahara app yekugadzirisa vhidhiyo nekugadzirisa) kuputika. iMovie inobatsira kusangana nezvinodiwa zvekutanga, asi kuifambisa kunonyanya kuoma pane foni ine compact compact yakadaro. Tichava nekureruka kwekugadzirisa pane mamwe madivayiri eIOS anowirirana, akadai seiyo iPhone 6s, iPhone 6s Plus kana iPad Pro.
El iPhone SE inobata zvakakwana zuva rakazara rekushandisa nguva dzoseKubudirira chaiko ndichifunga kuti handikwanise kuyeuka apo yangu iPhone 6s yakapedzisira kupona zuva rizere rekushandisa kwese pasina kuita kune inopfuura kamwe chete mari yekukurumidzira. Mumazuva angu maviri ekutanga ekushandisa neiyo iPhone SE, bhatiri harina kusvika kumagumo ezuva, asi mukuenzanirana, ndakaisa kushandiswa kwakanyanya kwechigadzirwa (kupfuura zvakajairwa, kuyedza processor yayo, kamera, kurekodha uye 4K kugadzirisa, nezvimwewo). Mamwe mazuva asara, umo ini ndashandisa nhare zvese pakushandisa pachedu uye nebasa, iko kuita kwave kuri nani. Zvisinei, ini ndichiri kusimbirira izvozvo Apple inofanira kugadzirisa mubazi rebheteri. Hongu, iyo iPhone SE bhatiri, ine chinokwana 1642 naRaama, inoita zvirinani kana ichienzaniswa nebhatiri reiyo iPhone 6s (ine 1715 mAh), asi vakwikwidzi veApple vanowana mamaki ari nani muchikamu chino (iyo Samsung Galaxy S7 yatobatanidza bhatiri 3.000 mAh ).
Kana zvakadaro Bata ID, Apple yakadzikisa mutengo uye ikashandisa iyo chizvarwa chekutanga chigunwe kuverenga. Zvichemo? Chaizvoizvo hapana. Ini ndatoita kusvika kumakumi maviri emiedzo yeiyo yekumhanyisa kumhanya kweiyo iPhone SE pamwe neiyo iPhone 20s uye mutsauko wekumhanya haunyatso kuoneka. Rangarira kuti Kubata ID kwakaburitsa yakawanda yakanaka kuongororwa mukuonekwa kwayo kwekutanga kune kwayo kukuru kushanda. Muvhiki randanga ndichishandisa foni, handina kumboona mutsauko kana zvasvika pakuvhura iyo terminal. Hongu, pane zvimwe zvinonetsa pakuziva zvakadhindwa kana ruoko rwako rwanyorova, asi hachisi chinhu chinofanira kudzosera mutengi kumashure. Iyo iPhone SE inoenderera kuve imwe yemafoni akachengeteka pamusika.
Hatikanganwe kamera. Iyo gumi nemaviri megapixel kumashure lens inopa iyo yakafanana mhando seiyo iPhone 6s lens. Uye iyo "truetone" flash inokusiya iwe semapofu mumifananidzo yehusiku. Dambudziko nemapikicha munzvimbo dzakaderera-mwenje zvinoramba zviri izvo kuti mwenje weApple unogona chete kutarisa pachinhu chemufananidzo uye kwete kune vamwe vese. Nekuda kweizvozvo tinowana chidzidzo chakanangiswa, asi zvimwe zvacho zvakadzikira. Iyo kamera yeSamsung Galaxy S7 inopa gumi gumi kune iyo yeiyo iPhone 6s muchikamu icho. Lens yekumberi inodonha kubva pamamegapixels mashanu kusvika ku5 megapixels. Zvekare zvakare, chinhu chisiri chakakosha zvakanyanya (hachizivikanwe kana uchigadzira videoconferensi kuburikidza neFaceTime).
Iyo iPhone SE inosanganisa iyo sarudzo yekutora mifananidzo inofamba (Rarama Mufananidzo), asi isu tinorangarira kuti chishandiso ichi chinotora zvakapetwa nzvimbo. Ini ndinokurudzira kuishandisa chete mune yakatarwa uye inorova kesi.
Pakupedzisira, a kusavapo muiyo iPhone SE, uye isingakoshe, ndeye iyo 3D Kubata. Iyi tekinoroji haina kushaikwa chero nguva. Uyezve, pane yangu iPhone 6s ini handikwanise kana kurangarira kuti ndakapedzisira kuishandisa riini. Inokurumidza kwandiri uye maitiro ekuenda kunzvimbo iri muapp yandiri kuyedza kuwana, pane kutanga mutambo uyo nechiratidziri. Kunyangwe iwe wakamboshandisa 3D Kubata muhupenyu hwako kana kwete, hauzopotse paApple's iPhone SE.
iOS 9. Mubatanidzwa wakakwana
Mune nhoroondo yeApple, software uye Hardware zvagara zvichifambidzana pamwe nekugadzira yakanaka vaviri. Mune ino kesi, roorano inoenda zvakanaka pamwe chete. Iyo M9 naSiri vanoita murume nemukadzi vanogodoka. Iyi ndiyo yekutanga foni ine mutengo wakaderera kubva kuApple iyo inoteerera nguva dzose, ichimirira mirairo yedu yakanangiswa kumubatsiri wezwi. Chishandiso chakakwana chehupenyu hwezuva nezuva uye icho padanho rega ndinoshandisa kakati wandei pazuva kuchengetedza zviyeuchidzo, kumisikidza maaramu, kutarisa karenda nenguva kana kutanga timer kana uchibika kana kugadzirira kana muchina wekuwachisa wapera. A nyore, "Hei Siri" ("hei Siri", mune yechiSpanish kesi), anomuka pafoni kubva kuhope yake. Chinhu icho Apple chakakwanisa kuita zvakakwana muzvigadzirwa zvayo, asi isu hatikanganwe kuti Motorola yaive imwe yevagadziri vekutanga kuita basa iri. Kana tavhura foni kekutanga, isu tinofanirwa kupfuura nhanho nhanho kumisikidza wezwi mubatsiri kuti ipindure nekukasira kana yoziva matauriro edu.
Iyi haisi yega portento yeM9 chip, iyo inokwanisa kuyera zvakaringana chiitiko chedu chemuviri. Yakanakisa kusanganisa nemashandisirwo anoverengera matanho edu ezuva nezuva uye ayo anoponesa data kubva kumadzinza edu, kana uchienda kunomhanya. Kana iwe uine Apple Watch, saka musanganiswa wakakwana.
El iPhone SE inouya neIOS 9.3 yakaiswa nekusarudzika, saka uchafanirwa kugadzirisa kune iOS 9.3.1 paunongobatidza foni. Iwo mabasa andakashandisa zvakanyanya muIOS 9.3 pane smartphone yave iri sarudzo yekuwedzera dura repiri rekudzivirira kune akachengetwa manotsi uye Night mode (Muchikamu chino ini ndinowanzo fambisa bhawa kune mavara anotonhora pane anotonhora, ayo anoita kunge anonetsa maziso angu zvakanyanya munzvimbo dzakaderera mwenje).
Mhedziso: Mutengo wakanakisa munhoroondo yeApple. Ndinogona kutenga iyo iPhone SE?
Apple's Trojan Horse inopinda mumusika nekupa mutengo wayo unoyevedza munhoroondo yekambani: 489 euros yeiyo 16GB modhi. Ehezve, tinokurudzira kusaita chikanganiso chekutora iyo iPhone nechinhu ichi chisina musoro (Apple, inguva yekuchinja zano). Zvirokwazvo mune iyo iPhone 7 iyo 16GB modhi yakatoraswa, uye Apple inotanga kubva ku64GB. Iyo inyaya yenguva uye nezvakawanda tichifunga nezveazvino zvigadzirwa zvemhando yepakati nepamusoro-magumo mafoni.
Kana iwe ukatenga 16GB iPhone, tora inofamba mafoto (Live Mifananidzo) uye tora 4K vhidhiyo, mumazuva maviri iwe unenge uine yese yekuchengetera inogarwa. Naizvozvo, tinokurudzira tenga iyo 589 euro modhi ine 64GB yekuchengetedzakana. Foni ikozvino yave kutengeswa kuSpain.
Kana iwe wawana a iPhone 6 kana 6s, rairo ndeyekumirira. MunaGunyana tichava nefoni nyowani yepamusoro-soro kubva kuApple uye zvese zvinoratidza kuti ichaona kugadziridzwa kwakadzika pamatanho akati wandei. Rangarira kuti kana iwe uchironga kutengesa zvakare yako iPhone 6 kana 6s, zvinokurudzirwa kuzviita mumavhiki pamberi pekuratidzwa kweiyo nyowani modhi, kuitira kuti kukosha kwayo kusadzike.
Nekudaro, kana iwe uri mune yechizvarwa chekare uye usingade kushandisa yakawanda mari pafoni nyowani, saka tinokukurudzira kuti utenge iyo iPhone SE: ine simba, yakasununguka uye yakachipa. Iwe hauzodemba chawakatenga. Ingo chengeta mundangariro zvayakanakira nezvayakaipira zvatakataridza mukuwongorora uku mushure mevhiki rekushandisa kwakanyanya.
Ongorora: Iyo yekupedzisira yeiyi ongororo yakweretwa kwenguva pfupi neAT&T.
Compact uye inobatsira fomati
Bhatiri harivandudze kupfuura vakwikwidzi
16GB modhi haina kukwana
Kudzokorora kwe: Pablo Ortega
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » Vhiki ine iyo iPhone SE: Iyo Kushuvira kweMana Inches
Ita 5se plus
Pablo Ortega (@PaulLenk) akadaro
Saizi yayo ipapo yaisazoita zvine musoro hehe Inenge iri iPhone 6s 😛
Pindura Pablo Ortega (@PaulLenk)
Yangu 6 Plus yakaputsika, ndinofunga ndichaenda kune SE uye ndomirira iyo 7 kuti ibude, hazvina kukodzera kutenga ma6s panguva ino ndizvo?
Ini ndaimirira iyo iPhone 7 kuti ibude.Mahara shanduko iri kuuya.
Mangwanani Pablo, maawa makumi mana nemasere ne48 Gb iPhone SE iyo yauya neIOS 64, nekushandisa kwese, mafoni, Whapp, mamwe mafoto, maemail, nezvimwe uye zvakadaro 9.3% bhatiri kubhadharisa, ndinokuona zvakanaka kwazvo Sekushandisa, Ini handizive kana iri nekuti nyowani, pamberi peiyi iPhone SE, ini ndaive ne iPhone 30S, ine Jeri .. ine iOS 4 uye mutsauko mukushandisa uri abysmal, uye ini ndaive ndisina yakawanda Cydia, Activator mafomu. Infinidock, uye zvimwe zvishoma.
Yangu iphone 4s ine ios 5.0 uye jailbreak uchishandisa wifi, ipapo 3g, bluetooh, kutarisa tsamba, kufona, wachi yewadhi, mumhanzi uye webhu kubhurawuza; mushure memazuva maviri bhatiri raive pa22%. Ndakabata rwendo ndokusiya charger kumba.
Ndine dambudziko ne iPhone yangu 4s isiri kuchaja bhatiri
Dzese nhau nezve iyo nyowani HTC M10
Iyo FBI haina kubhadhara Cellebrite, asi pane "grey ngowani" boka kuvhura iro remagandanga iPhone 5c